[औपचारिक] dr.fone - छनौट iOS डाटा ब्याकअप र रिस्टोर
dr.fone टुलकिट - iOS डाटा ब्याकअप र रिस्टोर
जगेडा र पुनर्स्थापना iOS डाटा लचिलो Turns
एक क्लिक जगेडा गर्न आफ्नो कम्प्युटरमा सारा iOS यन्त्र।
पूर्वावलोकन र उपकरणमा जगेडा कुनै पनि वस्तुलाई पुनर्स्थापना गर्न अनुमति दिनुहोस्।
तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरमा जगेडा के चाहनुहुन्छ निर्यात।
पुनःबहाली समयमा उपकरणहरूमा कुनै डाटा हानि।
dr.fone टुलकिट - iOS डाटा ब्याकअप र रिस्टोर तपाईं छानेर जगेडा दिन्छ र तपाईं iOS यन्त्रहरू / जगेडा देखि चाहनुहुन्छ जो बहाल।
dr.fone टुलकिट - iOS डाटा ब्याकअप र रिस्टोर गर्न अनुमति दिन्छ तपाईं आफ्नो iPhone र iPad मा लगभग सबै डाटा को एक पुरा जगेडा वा तपाईंले छानेर तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा राख्न चाहन्छु कि डाटा निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एक आवश्यकता छ जब, तपाईं पनि जगेडा डाटा तपाईंको उपकरणमा तपाईं चाहनुहुन्छ वस्तुहरू चयन गरेर पुनर्स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक राम्रो विकल्प iTunes वा iCloud प्रयोग भन्दा हुनेछ।
जगेडा तपाईंको साथ एक क्लिक आईफोन / आईप्याडका
सारा जगेडा कुरा मात्र तपाईं एक क्लिक लाग्छ। तपाईंको उपकरण जडान र पत्ता भएपछि, कार्यक्रम हुनेछ तपाईंको आईफोन, आईप्याड वा आइपड टच स्वतः ब्याकअप डाटा। नयाँ जगेडा फाइल पुरानो एक अधिलेखन हुनेछ। तपाईँले चाहेको बेलामा तपाईं जगेडा गर्न सक्नुहुन्छ।
फाइलहरू सबै प्रकार जगेडा
थप >> सिक्न
आईफोन जगेडा र पुनर्स्थापना सजिलो Turns
जगेडा र आफ्नो उपकरण जडान पछि एक क्लिकमा आईफोन डाटा बहाल।
आईफोन जगेडा फाइलहरू नवीन गरिनेछ
तपाईंले सबै जगेडा फाइलहरू बचत आईफोन गरेको जगेडा दैनिक बनाउन सक्छ र र नयाँ द्वारा प्रतिस्थापन गरिनेछ।
पूर्वावलोकन आईफोन जगेडा सामग्री
तपाईं राम्रो आफ्नो iPhone जगेडा व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईं, यो iOS जगेडा सबै आफ्नो iPhone जगेडा फाइलहरू विवरण पूर्वावलोकन र कार्यक्रम पुनर्स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ।
आईफोन पुनर्स्थापना तपाईंको डाटा अधिलेखन हुनेछ
पूर्वावलोकन पछि, तपाईंले आफ्नो iPhone वा iPad गर्न पुनर्स्थापना गर्न आफ्नो iPhone गरेको जगेडा कुनै पनि वस्तु चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई आफ्नो उपकरणमा अवस्थित कुनै पनि डाटा प्रतिस्थापन छैन।
तपाईंको आईफोन डाटा निर्यात
पढ्न वा तपाईंको डाटा मुद्रण गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले पनि एउटा HTML फाइल वा अरूलाई तपाईं चाहनुहुन्छ कि आफ्नो आईफोन जगेडा वस्तुहरू निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ। यो तिमीमा भर पर्छ।
तपाईं नवीनतम आईफोन7प्लस, आईप्याड प्रो, वा पुरानो आईफोन 4, आईप्याड 1 प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ कुनै कुरा छैन, यो iOS डाटा रिकभरी पूर्णतया आईफोन, आईप्याड र आइपड टच को सबै मोडेल उपयुक्त छ।
यो iOS जगेडा र कार्यक्रम पुनर्स्थापना पूर्ण पढ्ने-मात्र हो सफ्टवेयर। यसलाई परिमार्जन राख्न छैन, वा तपाईंको उपकरणमा वा जगेडा फाइल कुनै पनि डाटा लीक। हामी आफ्नो व्यक्तिगत डाटा लिन र गम्भीर खाता। तपाईं सधैं यो उपयोग गर्न मात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ।
जगेडा फाइलहरू देखि निर्यात डाटा
जगेडा फाइलहरूको रूपमा, तपाईंले एक आवश्यकता छैन कि ती सबै राख्न वा कुनै पनि मेटाउन चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, तपाईं पूर्वावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको कम्प्युटरमा ब्याकअप फाइल कुनै पनि वस्तुहरू निर्यात, र तिनीहरूलाई, HTML, CSV वा vCard फाइलहरू बचत गर्नुहोस्।
जगेडा र सजिलै तपाईंको iOS यन्त्रहरूमा डाटा बहाल।
100% सुरक्षा ग्यारेन्टी
यो केवल डाटा, जोखिममा कुनै डाटा पढ्छन्।
यो कुनै उपलब्ध, कुनै प्रविधी ज्ञान सोधे।
डाटा कुनै हानि
त्यहाँ जगेडा, निर्यात वा पुनर्स्थापना समयमा गुमाए कुनै डाटा छ।
आइओएस डाटा ब्याकअप र सबै iOS यन्त्रहरू लागि काम गर्दछ पुनर्स्थापना
आईप्याड सबै मोडेल प्रो, आईप्याड एयर, आईप्याड मिनी, आईप्याड
फाइल निर्यात स्वरूप
गर्न .csv, .html, वा vCard रूपमा कम्प्युटरमा सम्पर्क र सन्देशहरू निर्यात;
निर्यात WhatsApp .csv वा .html रूपमा कम्प्युटरमा सन्देशहरू;
निर्यात कल लग, नोट्स, क्यालेन्डर, रिमाइन्डर र सफारी गरेको .html रूपमा कम्प्युटरमा बुकमार्क।
EXELLENT र beautifull र धेरै importaint कार्यक्रम।
द दिन सुरक्षित गरियो। सुन यसको वजन लायक। धन्यवाद।
Tyrone विलियम्स, आईफोन
तपाईँले हराएको डाटा गर्यौं भने एक हुनुपर्छ!
सिद्ध उत्पादन iPhone लागि ठूलो काम गर्छ।
3 iPhone र iPad मा जगेडा नोट्स तरिकाहरू
iTunes जगेडा के गर्छ?
कसरी iPhone र Android उपकरणहरूमा WhatsApp जगेडा पुनर्स्थापना गर्न
जगेडा iCloud सम्पर्क गर्न दुई तरिका
कसरी जगेडा लक आईफोन7(प्लस) / एसई / 6s (प्लस) /6मा डाटा
कसरी iTunes जगेडाबाटपूर्वावस्थामाल्याउनुहोस् गर्न
आईफोन जगेडा एक्स्ट्रेक्टर: निकाल्नुहोस् र iPhone डाटा पुन: प्राप्त
संग / जगेडा आईफोन संपर्क iTunes बिना4तरिका
आईफोन जगेडा स्थान कसरी पाउन र जगेडा हटाउनुहोस् गर्न
आईफोन, आईप्याड र आइपड टच देखि हराएका वा मेटाइएको सम्पर्क, सन्देशहरू, फोटो, टिप्पणीहरू, आदि रिकभर।